I-Lumens Ingenisa iNew 4K UHD IP Camera | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » Okufumaneka » I-Lumens Ingenisa i-New 4K UHD IP Camera
Ukususela kwi1998, Lumens iphumelele ukuhlangula iimveliso zamehlo eziphezulu egxila ekusebenzeni kwemifanekiso, kwizixhobo zombane zevidiyo, nakwitekhnoloji yamehlo. Inkampani inikezela HD Iikhamera ze-PTZ, iikhamera zoxwebhu lwe desktop, iikhamera zoxwebhu eziphathwayo, iikhamera zoxwebhu lwophahla, kunye neenjini zokubonisa. Enkosi ngenkxaso ye Iqela le-Pegatron, inkampani iyaqhubeka nokuphucula yonke uyilo lwemveliso ukuba isetyenziswe kumagumbi okufundela, kumagumbi enkomfa, nakwimfundo yokufunda umgama.
I-Lumens isandula ukuvula ikhamera yayo ye-IP yamva nje kumdlalo wekhamera ye-PTZ IP VC-A61P. Le khamera yevidiyo idlula ababengaphambi kwayo, i I-VC-A60S kwaye I-VCA50P ngekhwalithi yayo ekhethekileyo ye-4K UHD ye-Ultra-ecacileyo yomgangatho wevidiyo kunye namandla okwenziwa kwe-30x
Ikhamera ye-IP ye-VC-A61P PTZ iphucula ubume
Ikhamera ye-VC-A61P PTZ inesakhono sokuyila abenzi kunye nokuhambisa iinkcukacha ezimangalisayo kunye nokucaca kwabathathi-nxaxheba nokuba zikwindawo ekude. Ikwabonelela ngeendlela ezahlukeneyo ezinjenge-Ethernet, HDMI, kunye ne-3G-SDI. Ezi zinto zizodwa zisebenza kuphela ukuphucula amandla okunxibelelana kwekhamera.
I-VC-A61P ihambisa Imifanekiso ecacileyo
Ngaphandle kokufumana ukukhanya okuphantsi kunye nokungafani okugqithileyo kokukhanya kunye nobumnyama kwigumbi, ikhamera ye-VC-A61P PTZ isakwazi ukuhambisa umfanekiso ocacileyo osikiweyo. Oku kwenza ukuba ikhamera ibe sisixhobo esihle sokufaka iminyhadala ephilayo phantsi kwalo naluphi na uhlobo lwendalo.
USteven Liang, UMlawuli eLumens Digital Optics Inc.
Njengenkokeli yehlabathi kwimakethi yeProAV, iiLumens zenze ukuba kube lula ukubamba, ukufaka ikhowudi kwinkqubo kunye nokusasaza imifanekiso kunye nazo naziphi na iimveliso zekhamera ye-IP abaziphuhlisayo. Le nyani yacaciswa ngakumbi nguMlawuli wolawulo lweMveliso yenkampani, USteven Liang Ngubani owathi,Ikhamera yethu entsha ye-PTZ IP ivumela i-4K ukusasaza okwenyani kunye nokurekhoda okunika abasebenzisi ukuguquguquka ngakumbi kwi-webcasting kwaye kwangaxeshanye ukurekhoda iinkomfa, izifundo, kunye nemicimbi ephilayo kunekhamera ye-AV eqhelekileyo. ” Ngenxa yeprothokholi ye-Intanethi kunye netekhnoloji ye-PoE, ikhamera ye-VC-A61P PTZ inokufezekisa owona msebenzi uphakamileyo kunye nokufaka iindleko kwi-AV yomthathi-nxaxheba kwisisombululo sabo se-IP.
Ikhamera ye-VC-A61P PTZ IP iyafumaneka ngoku kwaye ufunde ngakumbi ngayo, emva koko ujonge: www.netsons.com.
4K UHD Ikhamera ye-AV CES2017 UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli Lumens MStar Pegatron SoftAtHome SoftAtHome, MStar, iCES2017 Imikhonto kunye neentolo I-Ultra HD Forum Ikhamera ye-VC-A61P PTZ IP 2019-10-03
Previous: IArgosy yomeleza Ukuzibophelela kwiNtengiso yaseMiddle East ngokuVulwa kweZiko elitsha
next: I-Artjail iphakamisa ibar nge-Baselight color grading